Akwụkwọ Ozi Nke Abụọ E Degaara Ndị Kọrịnt 2:1-17
Pọl chọrọ ime ka ndị ọzọ na-enwe aṅụrị (1-4)
A gbaghaara onye mere mmehie, nabatakwa ya n’ọgbakọ (5-11)
Mgbe Pọl gara Troas na mgbe ọ gara Masedonia (12, 13)
Ndị na-ezi ozi ọma na-enwe obi ụtọ ka ndị meriri n’agha (14-17)
Anyị anaghị ere okwu Chineke ere (17)
2 Ekpebiela m na mgbe ọzọ m ga-abịa ịhụ unu, agaghị m eme ihe ga-ewute unu ọzọ. 2 N’ihi na ọ bụrụ na mụ emee ihe ga-ewute ununwa na-eme m obi ụtọ, ònyezi ga-eme m obi ụtọ? 3 Ihe mere m ji dee ihe a bụ ka unu ghara ime ihe ga-ewute m mgbe m bịara, kama ka unu mee ihe ga-eme ka m ṅụrịa ọṅụ. N’ihi na obi siri m ike na ihe na-eme ka m nwee aṅụrị na-emekwa ka unu nwee aṅụrị. 4 N’ihi na eji m obi mgbawa na ezigbo anya mmiri na-ede akwụkwọ ozi a, obi adịghịkwa m mma. Anaghị m ekwu ihe a ka obi ghara ịdị unu mma,+ kama ka unu wee mara otú m hụruru unu n’anya. 5 O nwere onye mere ihe wutere unu.+ Ọ bụ unu ka ihe o mere wutere, ọ bụghị mụnwa. Ma, achọghị m ikwu ọtụtụ okwu gbasara ya. 6 Ahụhụ unu tara onye ahụ ezuola. 7 Ihe unu kwesịrị ime ugbu a bụ ịgbaghara ya ma kasie ya obi,+ ka otú ọnọdụ ya si ewute ya ghara ime ka ọ daa mbà.+ 8 N’ihi ya, ana m agba unu ume ka unu gosi ya na unu hụrụ ya n’anya.+ 9 Ihe ọzọ mere m ji na-edetara unu akwụkwọ ozi a bụ iji chọpụta ma ùnu na-erube isi n’ihe niile. 10 Agbagharala m onye ọ bụla unu gbaghaara. N’eziokwu, m gbaghara mmadụ, ọ bụ iji nyere unu aka. Kraịst bụkwa onye akaebe m. 11 Ịgbaghara mmadụ dị mkpa ka Setan wee ghara ịghọgbu anyị,+ n’ihi na anyị ma otú o si anwata ndị mmadụ.+ 12 Mgbe m ruru Troas+ izisa ozi ọma banyere Kraịst, e mere ka m nwekwuo ohere ịrụ ọrụ Onyenwe anyị. 13 M nọ na-echegbu onwe m maka na ahụghị m Taịtọs+ nwanna m. N’ihi ya, m sịrị ụmụnna nọ ebe ahụ ka ọ dị n’oge ọzọ, gawazie Masedonia.+ 14 Ma ekele dịrị Chineke, onye na-edu anyị ka anyị soro Kraịst na-enwe obi ụtọ otú ndị agha na-enwe ma ha merie n’agha. Ịmata ihe gbasara Chineke dị ka ịnụ ísì ọma. Chineke na-ejikwa ọrụ anyị na-arụ eme ka ndị mmadụ na-anụ ísì ọma a n’ebe niile. 15 N’anya Chineke, anyị, bụ́ ndị na-ezisa ozi ọma gbasara Kraịst, dị ka ihe na-esi ísì ọma. Ma ndị a ga-azọpụta ma ndị ga-ala n’iyi na-anụ ísì ọma a. 16 N’anya ndị na-ala n’iyi, ọ bụ ísì ọnwụ nke na-egbu mmadụ,+ ma n’anya ndị a ga-azọpụta, ọ bụ ísì ndụ nke na-eme ka mmadụ dịrị ndụ. Ònye ruru eru ije ozi a? 17 Anyị ruru eru n’ihi na anyị anaghị ere okwu Chineke ere+ otú ọtụtụ ndị na-eme. Ebe ọ bụkwa na n’anya Chineke, anyị na-eso ụzọ Kraịst, bụrụkwa ndị Chineke zipụrụ, anyị na-eji obi anyị niile ezi ozi ọma.